बाटुलेचौरमा श्रवण कुमार गृह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बन्ने – Gandaki Voice
Home/समाचार/बाटुलेचौरमा श्रवण कुमार गृह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बन्ने
बाटुलेचौरमा श्रवण कुमार गृह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बन्ने
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ बाटुलेचौरमा श्रवण कुमार गृह ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र बन्ने भएको छ । केन्द्रको भवन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले शिलान्यास गरे । उक्त अवसरमा उनले समृद्धिको आधार प्राप्तिका लागि विकास निर्माणमा तीनै तहका सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिंदै आएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकार र समाजको साझेदारीमा गरिने निर्माण उपलव्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । सरकार सडक मानवरहित प्रदेश बनाउने अभियानमा जुटेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सबै पक्षको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरे ।
कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को उपचारमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार भएर लागेको बताउँदै उनले सरकारी अस्पतालले निःशुल्क उपचार गर्दा पनि कतिपय बिरामीलाई परिवारले निजी अस्पतालमा लैजाने गरेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले सरकार ज्येष्ठ नागरिकप्रति गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दुई बर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक भक्ता पाँच हजार पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दु थापाले समाजका ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा दिनुपर्ने व्यवहार यथेष्ट नपुगेको बताउँदै दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएसंगै उनीहरुलाई केही हदसम्म भए पनि सुविधा पुग्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फवाट ५० हजार १५५ रुपैयाँ अक्ष्यकोषका लागि प्रदान गर्ने घोषणा गरिन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु मिना गुरुङ र पुष्पा केसी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र निर्माणमा सरकारी तथा आप्mनो तर्पmबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीले विगत लामो समयदेखिको अथक प्रयासबाट केन्द्र निर्माण कार्य अघि बढेको भन्दै जनताले तिरेको करबाटै महानगरले विकासमा खर्च गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रको निरन्तरताका लागि समितिले सञ्चालन गरेको अक्षयकोषमा जम्मा हुने गरी राजेश गुरुङले एक लाख, लोकबहादुर थापाले रु. ५० हजार र कार्य समितिकोतर्फबाट १२ लाख रुपैया गरी कूल १४ लाख रुपैया जम्मा भएको अध्यक्ष दानबहादुर बानियाले जानकारी दिए ।
आश्रमको बडहर बोटस्थित सार्वजनिक जग्गामा कूल तीन लाखको लागतमा तीनतल्ले पक्की भवन निर्माण गरिने छ । जसको पहिलो तल्लामा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण, अध्ययन स्थल र भान्छा रहने छ भने दोस्रोमा प्रवचन तथा योगा हल तथा तेस्रो तल्लामा कार्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ ।
आगामी दुई बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गरिने सो भवनका लागि प्रदेश सरकारबाट एक करोड, पोखरा महानगरपालिकाबाट एक करोड र संघीय एवं प्रदेशसभा सदस्यहरुबाट समेत सहयोग हुने आश्वासन प्राप्त भएको संस्थाका सचिव दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
विग ड्रिमर्सद्धारा सहयोग
सूर्यदेवको अराधाना गर्ने दिन 'मृत्यु' योग, कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?